Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များသည် IBC ရှိလူထုတိမ်တိုက်အတွက်သေတ္တာတစ်ခု၌ Virtualized Channel ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC မှာပြည်သူ့တိမ်တိုက်တစ်ခု Box မှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ Rolls Out virtual Channel ကို
IBC မှာပြည်သူ့တိမ်တိုက်တစ်ခု Box မှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ Rolls Out virtual Channel ကို
Software များ-defined virtualized အိုင်ပီလိုင်းကိုဖြေရှင်းချက် Orcas, ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူနှစ်ဦးစလုံးသည်မိုဃ်းတိမ်ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်ယခုရရှိနိုင်
ရပ်တည်ချက် 2016.C8 အပေါ် IBC 71 မှာ, Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များတစ်ဦးဦးဆောင်အလိုအလျောက်, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းအထူးကု, အမေဇုံက Web Services ကကိုအသုံးပြုပြီး public မိုဃ်းတိမ်ကို (AWS) ၌၎င်း, ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်၌မျိုးစုံ virtualized လိုင်းများ၏ဖြန့်ကျက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Pebble ရပ်တည်ချက်မှဧည့်သည်များ Orcas, အရှိ Marina အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ run နေ Pebble ရဲ့ virtualised ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. မိုဃ်းတိမ်၌မျိုးစုံလိုင်းများ၏ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် hosting အတွက်ဖေါ်ပြခြင်းတိုက်ရိုက်သရုပ်ပြတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာမိနစ်တစ်ဦးအမှု၌အသစ်သောချန်နယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်စွမ်း, အဖြစ်အပျက်-based လိုင်းများ-up, pop မှ Pebble ရဲ့အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်စေသည်များနှင့်သဘာဝဘေး Recovery ကို applications များဖြစ်သည်။
Orcas နှင့်အတူ, centralcast အချက်အချာ, ဝန်ဆောင်မှုပေး, MCOs (အကွိမျမြားစှာ Channel ကိုလုပ်ငန်းရှင်များ), အားကစားထုတ်လွှင့်နှင့်များစွာသော corporate ခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှာတင်းပလိတ်များတဲ့စီးရီးထဲကနေသစ်ကိုအိုင်ပီချန်နယ်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်အပြေးသည့်စနစ်သို့လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်စွမ်းရှိ configuration ကိုအပြောင်းအလဲများကိုပြန်လည်စတင်ရန်သို့မဟုတ်စေရန်မလိုဘဲ။ အပြည့်အဝ automated လိုင်းများပေါ်တွင်-ဝုဏ်စနစ်များကဲ့သို့တူညီသော Marina အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးပြု. လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများနည်းနည်းအပိုဆောင်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူတစ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှာဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အပြေးနိုင်ပါတယ်။
"အပြေးတစ်ဦး box ထဲမှာတစ်ဦးကကို virtual ရုပ်သံလိုင်း, တစ်ခုခုကိုပုဂ္ဂလိကတစ်ခုသို့မဟုတ်အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာ, ရှုပ်ထွေးဟာ့ဒ်ဝဲ၏ထိန်သိမ်းနှင့် setup ကိုနှင့်ယာယီနေရာချထား၏ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမရှိဘဲချက်ချင်းအိုင်ပီ-based လိုင်းများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့သို့မဟုတ်စာချုပ်တစ်ခုတတ်နိုင် option ကိုကယ်တင်တတ်၏" မှ Ian Cockett, CTO မှာပြောပါတယ် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ။ "အသုံးပြုသူတစ်ဦးရှုထောင့်ကနေဒေသအလိုက်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌တစ်ဦးချန်နယ်ဖန်တီးအတူတူပင်အနီး-လက်ငင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်၏။ "
သဘာဝဘေး Recovery ကို applications များအဘို့, Orcas လိုအပ်တဲ့အခါမှသာသည် dynamically ချထားနိုင်မယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ သည့်အခါလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်သာစွဲချက်တင်နေကြသည်ကတည်းကဤသည်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကုန်ကျစရိတ်ကယ်တင်တော်မူ၏။ နေ့အဘို့တန်ပြန်မြင်ပြပွဲအကြောင်းအရာများလျင်မြန်စွာမိနစ်များတွင်တင်ထားသောနိုင်ပါတယ်စဉ်သိုလှောင်ခြင်း, အရေးပေါ်ကာလအတွင်း run ခံရဖို့ backup လုပ်ထားပစ္စည်းဆံ့နိုငျသညျ။ အကြောင်းအရာအပ်လုဒ်တင်ထားသောနှင့်တကွ, DR feed ကိုမူလထုတ်လွှင့်တဲ့ပြီးပြည့်စုံသောမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
"အများအပြားထုတ်လွှင့်သည်, ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အပြိုင်ပြေးနေတဲ့ရုပ်သံလိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် overhead လက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်မှအနည်းငယ်မျှသာကုန်ကျခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မှာအတူတူပင် UI ကိုနှင့်အော်ပရေတာအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းဝုဏ်အတွင်းတပ်ဆင်အပေါ်တစ်ဦးထုတ်လွှင့်မယ့်ကိုထင်ဟပ်သောမိုဃ်းတိမ်၌ on-demand ပြန်အခြေခံအဆောက်အအုံတက်စေလွှတ်, "Cockett ကထပ်ပြောသည်။
IBC မှာ, Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ ထို့အပြင်၎င်း၏အသစ်က AWS Channel ကိုဖွင့်တင်တစ်ခု Ultra-အစာရှောင်ခြင်းရုပ်သံလိုင်းဖြန့်ကျက် tool ကိုအစမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည်။
အကြောင်းအရာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာ Multichannel ဂီယာအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသတင်းနှင့်အားကစားရုပ်သံများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအရွယ်မှာထုတ်ကုန်နှင့်အတူကမ္ဘာအလိုအလျောက်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး box ထဲမှာရုပ်သံလိုင်း, ဘက်ပေါင်းစုံနှင့် virtualised ပလေးအောက်ကိုနည်းပညာ, ဖြစ်ပါတယ်။ , 70 နိုင်ငံများထက် ပို. နှင့်စစ်ဆင်ရေးများတွင် 150 လိုင်းများကျော်တစ်ခုတည်းကနေဖွင့်ဖို့အထိသက်သေစနစ်များနှင့်အတူ Installed Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ စားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖိုင်-based Workflows ပတ်ဝိုင်းထားတဲ့ပွင့်လင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စနစ်များ, ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Pebble အသံလွှင့်စနစ်များအဖြစ် US မှာကုန်သွယ်မှု။
web ကို: www.pebble.tv
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ တစ်ဦး Vislink ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Vislink plc အကြောင်း
Vislink plc '' မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေမျက်နှာပြင်မှ '' အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယို၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစုဆောင်းခြင်း, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်အဘို့အဖြေရှင်းချက်ကိုအထူးပြုနေတဲ့ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ software နှင့်နည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းအသံလွှင့်စျေးကွက်အဘို့, Vislink အသက်ရှင်သောသတင်းများ, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏စုဆောင်းမှုအဖြစ်ရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်များအတွက် software ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကိုနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ Vislink လည်းထိုကဲ့သို့သောဥပဒေနှင့်အမိမြေလုံခြုံရေးအဖြစ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှု application များအတွက်လုံခြုံသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပေးပါသည်။
Vislink ဗြိတိန်, အမေရိကန်, ယူအေအီးနှင့်စင်္ကာပူရှိရုံးများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 250 လူမျိုးကိုစိုးန်ထမ်း။ Vislink ကျော်£ 52 သန်း၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စတော့အိတ်ချိန်း (VLK AIM) ၏ AIM စျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များခရီးစဉ် www.vislinkplc.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-08-31
ယခင်: Lectrosonics, DPA မိုက်ကရိုဖုန်း, အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့ Host မှ
နောက်တစ်ခု: DoCaption ရဲ့နယူး OP-47 နှင့် SMPTE 2031 စာတန်းထိုးစောင့်ကြည့်ယူနစ်တပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ